VITRINE DU VAKINANKARATRA : Nandray anjara ny BNI Madagasikara
Toy ny fanao isan-taona dia misy ny hetsika fampirantiana ny vokatra ara-toekarena mampalaza ny faritr’i Vakinankaratra, ka tontosa ny faran’ny herinandro teo izany. 4 septembre 2017
Naharitra telo andro ny fampirantiana ary teo amin’ny Garan’Antsirabe no nanatanterahana izany. Anisany nandray anjara mavitrika tamin’ity hetsika ity araka izany ny Banky Nasionalin’ny Indostria na ny BNI, ka nampahafantatra ny tombontsoa lehibe sy ny tolotra afaka omena ny mpanjifa izy ireo tamin’io fotoana io.
Miezaka hatrany ity banky ity ny hanakaiky ny mpanjifany ary raha tsiahivina kely dia efa mahatratra 61 amin’izao fotoana izao ny masoivoho ahitana ny BNI manerana ny Nosy. Tsy hijanona amin’izay ihany hatreto ny fanatsarana fa mbola hitohy noho ny fampandrosoana ara-toekarena. Toy ny ao an-drenivohitr’i Vakinankaratra, ohatra, dia manana masoivoho roa izy ireo ary manana”GAB” maromaro ihany koa. « Manoloana izay fandraisana anjara notontosaina izay no maneho ny fiaraha-miasa ara-toekarena sy ara-tsosialy amin’ny fampandrosoana ny faritra”, raha ny hazavana nataon’i Nantatiana Ratovohery Talen’i Masoivohon’Antsirabe.
Mitohy ny fiaraha-miasan’ny ISCAM sy ny BNI Madagascar eo amin’ny sehatry ny asa
Miezaka manakaiky ny olon-drehetra hatrany ny BNI Madagasikara amin’izao fotoana izao. Porofon’izany ny fandraisana an-tanana nataon’izy ireo tamin’ny alalan’ny “partenaire Gold” nandritra ny famoahana ny mpianatry ny Institut Supérieur de la communication natao tao ami’ny CCI Ivato, ny faran’ny herinandro lasa teo ihany. Andiany faha-26 ity navoaka ity raha ny fanazavana voaray ka mitondra ny anarana hoe “Tsiry Itokiana”.
Ny tanjona hatreto dia ny fitohizan’ny fiaraha-miasan’ny roa tonta hatrany, izay efa nisy an-taonany maro. Samy mahazo tombontsoa araka izany izy ireo noho izay fifandraisana akaiky izay ary azo lazaina fa mbola hotohizana ny fiaraha-miasa raha ny nambaran’ny Lehiben’ny fitantanana ny mpiasa eo anibon’ny BNI Madagasikara. Misy avy hatrany ny fandraisana ireo ankizy nahavita fianarana manana ny marim-pahaizana ambony indrindra ka hitantana ireo masoivoho vaovao ankehitriny.